Mpiasa Ao Rosia Avy Any Azia Afovoany Tezitra Amin’ireo Vehivavy Mpiray Tanindrazana Aminy ho ‘Manala Baraka ny Firenena’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2014 12:02 GMT
Vehivavy Ozbeka trerotreronin'ny lehilahy iray mitazona rantsakazo tao amin'ny lahatsaro iray nakarina ao amin'ny fantsona tajik RFER/L.
“Nahoana ianareo no mivaro-[tena]?”
“Miangavy, aza manao izao…. Manan-janakalahy roa taona aho…. Mianiana amin'ny Koràny aho, handao ity asa ity aho. Raha mbola mahita ahy eto ianao dia vonoy aho.”
Ao amin'ny lahatsary iray, vehivavy iray lazondazony miezaka ny manafina ny tavany tsy ho hita amin'ny fakantsary raha manaiky izy fa manao asa fivarota-tena. Miangavy ilay lehilahy mitazona ny fakantsary izy tsy hanafay azy. Manala vonkony amin'ilay vehivavy sy ny namany ho “manala baraka ny anaran'ny Tajika” any Rosia ilay lehilahy ao ambadiky ny fakantsary. Mandrahona izy fa hanafay azy ireo amin'ny alalan'ny fanasolàna ny lohan'izy ireo sy amin'ny alalan'ny fanapariahana ny lahatsary any amin'ny media sosialy.
Na dia niangavy ny tsy hanononana ny anarany aza ireo vehivavy dia noterena hilaza ny mombamomba azy ireo. Mandohalika ao anatin'ny tahotry ny fankatoavana izy ireo, miandry ny lohany ho voaharatra. Nalaza vetivety ao anatin'ny faribolana Tajika ao amin'ny Odnoklassniki — tambajotra sosialy naorina tany Rosia — sy tao amin'ny Youtube izany sehatra mampihoron-koditra izany.
Maro ny lahatsary ahitana vehivavy avy any Azia Afovoany voampanga ho manao asa fivarota-tena sy “mampaha-menatra ny fireneny sy ny fivavahany” amin'ny ankapobeny no nakarin'ny mpisera tsy fantatra maromaro ao amin'ny sehatra fifampizarana rakitra tato ho ato. Ireo lahatsary, nofafan'ny mpampitonin'ny media sosialy, no mipoitra fanindroany indray rehefa navoakan'ny mpisera isan-karazany.
Raha mitabataba amin'ny fanandevozana vehivavy ataon'ny ISIS ny izao tontolo izao, ny mpiseran'i Azia Afovoany kosa miady hevitra mafana amin'ny lahatsary mamelabelatra ny fanenjehana sy ny fanasaziana ara-batana ireo vehivavy aziatika afovoany ahiana ho manao asa fivarota-tena.
Tsy zava-baovao ny fanalam-baraka ampahibemaso amin'ny lahatsary ireo vehivavy Kyrgyz sy Tajik mpifindra-monina ao Rosia , saingy fironam-pakàna tahaka mahatratra ny vondrom-piarahamonin'ny mpifindra monina avy amin'ny firenen-kafa ao amin'ny faritra. Tamin'ny Novambra lasa teo nisy lahatsary nivoaka tao amin'ny Youtube nampiseho vehivavy roa any Ozbekistan mipetraka sy mifatotra an-damosina ny tanany. Ny lehilahy ao amin'ny lahatsary mamono azy ireo tamin'ny tapa-kazo sady miantso azy ireo ho vehivavy janga
Noraisin-tsary teo anoloan'ny olona hafa izany tranga izany, ahitana vehivavy sy tanora. Na dia nofafàna ao amin'ny Youtube aza ny loharanony, dia mbola misy ampahan'ny lahatsary azo jerena amin'ny alalan'ny fantson'ny RFE/RL ihany.
Mandritra izany fotoana izany, nisy lahatsary efa ela nanasongadina vehivavy Tajik nalàn'ny mpiray tanindrazana aminy baraka ao Rosia nahazo vahana indray tamin'ireo Tajika misera ny Odnoklassniki. Nahangona fanehoan-kevitra mihoatra ny 5 200 tao anatin'ireo herinandro maromaro farany ilay lahatsary navoaka indray. Nanapa-kevitra ny Global Voices ny tsy hamoaka ny anaran'ireo mpaneho hevitra noho ny hasaro-padin'ny lohahevitra.
Raha ampitahaina dia vitsy ny mpaneho hevitra nanameloka ilay fanasaziana miorina amin'ny voninahitra, ny ambiny kosa, na lahy na vavy, mandrisika ireo mpampijaly.
Vehivavy mpisera iray, M., miantso ireo vehivavy ao amin'ny lahatsary ho “janga, tsy misy voninahitra.” Ny iray hafa mivavaka ho an'ny “…vehivavy miozolomana rehetra hitandrina tsy handeha amin'ny lalan-diso sy ho voatarika mankany amin'ny lalana marina, sy hanana ny voninahitry ny hijab.” S., izay vehivavy ihany koa, manameloka ireo fianakavian'ny lasibatra: “Raha fianakaviana tsara ilay fianakaviana, dia hihalehibe anatin'ny fahamendrehana ny ankizy.”
Mirona mankany amin'ny herisetra ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny lehilahy mpisera. T. wrote: “Tokony haratana ny lohany dia alefa mivoaka any ivelany ry zareo (any an'arabe).” R. nanampy ako ny fihetseham-pon'i T., ary nisy mpisera hafa, I. nidera ireo lehilahy nitarika ny fanaovana famaizana, “Aoka i Allah hampiakatra ny isan'ireo karazan-dehilahy Tajik manan-kaja ireo. “
H. nandroso hevitra hahamafy kokoa ny famaizana: “… Raha any Afghanistan dia mety efa voahantona na voatifitra tahaka ny alika ry zareo.” Ny sasany, ahitana an'i D. sy i B. kosa manohana ny handorana azy ireo velona. B. niteny hoe, “Be famindra-po isika Tajika. Efa nitifitra azy ireo raha ny firenena hafa.”
Saingy misy ireo mpaneho hevitra nampiseho fangorahana ireo lasibatra. Afisy iray izay mandeha amin'ny anarana ‘Allah ihany no atahorako,’ nanoratra: “…Tsara kokoa ny nanome azy ireo $100 dia niteny azy ireo hody…” J. scolds ilay mpanao ny lahatsary sy ny mpanohana azy niteny hoe: “…raha mandeha any aminareo ireo vehivavy ireo ka mangataka 1000 somoni [$200] aminao, dia tsy hisy aminareo hanome izany. Mihevitra anareo ho mpitsara angaha ianareo? Andriamanitra irery ihany no mpitsara ny Miozolomana.” Nanampy i A.: “Ianareo milaza amin'izy ireo ho mitondra henatra ny Tajiks? Nanenina tamin'izay nataony izy. Saingy nitondra henatra ny Tajika ianareo tamin'ity lahatsary ity ary nampiseho izany tamin'ny olon-drehetra.”